Zavatra crypto mpampiasa vola mety hiatrika hatramin'ny 55% hetra amin'ny tombom-barotra - Blockchain News
Febroary 10, 2018 Admin
Zavatra crypto mpampiasa vola mety hiatrika hatramin'ny 55% hetra amin'ny tombom-barotra
Japana National Tax Agency Namoaka didy tamin'ny taon-dasa fa Renivohitra tombony amin'ny cryptocurrency po dia endriky ny “Miscellaneous fidiram-bola,” ankehitriny ireo mpampiasa vola takiana mba hanambara ny tombom-barotra amin'ny hetra isan-taona noho Feb filings. 16-March 15.
Tsy toy ny winnings eo amin'ny boloky hazo sy ny vola vahiny, izay hetra manodidina 20 isan-jato, Japana Levy amin'ny tombom-barotra avy amin'ny virtoaly vola mihazakazaka avy 15 isan-jato ny 55 isan-jato. Ny vola ambony dia mihatra amin'ny olona amin'ny vola miditra isan-taona ny 40 tapitrisa yen ($365,000).
Tsy misy tombony renivohitra hetra amin'ny fampiasam-bola maharitra ao amin'ny virtoaly vola sasany les juridictions anisan'izany Singapore, vitsivitsy cryptocurrency-karena mpampiasa vola no efa nandao Japana, hoy Kengo Maekawa, lehiben'ny mpanatanteraka ny Shiodome Partners Tax Corp.
Ny vola miditra mety ho-nanangana ny governemanta Japoney mety ho manan-danja. Ao anatin'ny volana vitsivitsy izay momba ny 40 isan-jato ny raharaham-barotra tany Bitcoin rehetra efa manohitra ny Yen.
Nandritra izay fotoana izay, ny hetra fahafahana misafidy dia mamorona ny antontan-kevitra fototra momba cryptocurrency mpampiasa vola sy ny ekipa monina any Tokyo sy Osaka no mihazona akaiky elektronika fiambenana barotra.
Governemanta Indiana miezaka hiady Blockchain fanafody sandoka
Ny governemanta Indiana ...
Previous Post:Thailand ny Minisitry ny Vola: Governemanta dia tsy handràra cryptocurrency varotra
Next Post:Cryptocurrency fifanakalozana BitGrail insolvency manambara aorian'ny Hack